Fowdo midab leh oo uu farshaxaniste u dhashay Polishka jaranjarada Matxafka Qaranka | Abuurista khadka tooska ah
Farshaxanistaha reer Polish wuxuu ku buufiyaa jaranjarooyinka National Gallery rinji wuxuuna ku kasbaday saameyn xiiso leh
Sida inaan nahay caruur yaa waxaan qaadannaa dheriga rinjiga waxaanan bilaabaynaa inaan ku rushayno dhammaan gasacadahaas midabbada midabbada leh ee burushka, farshaxan reer Poland ah ayaa ku soo duulay Matxafka Qaranka ee waddankiisa si uu u fuliyo mashruucan farshaxan ee aan cidna uga tagi karin danayn sababtoo ah midabka buuxinaya geesaha sallaankaas weyn .
Zacheta, Matxafka Qaranka ee Farshaxanka Poland, waa goob isku dhafan farshaxanka ugu casrisan uguna dhaqanka badan oo taariikhi ah. Bandhigyada ayaa badanaa lagu qabtaa, laakiin waa rinjiyeha Leo Tarasewicz oo adeegsaday jaranjarada weyn ee matxafka si uu ugu beddelo shiraac uu ku sameeyay gabal dhan oo farshaxan oo mudan in la sawiro oo laga bogo.
Wuxuu ku daboolay jaranjarooyinka rinjiga rinji. Marka hore, ka muuqaal muuqaal fowdo ah Waa la fahmi karaa, laakiin waa sababta oo ah Leon wuxuu lahaa aragti cad oo ah inuu doonayo inuu rinjiyeeyo oo uu si taxaddar leh u qorsheeyo wax walba habkaas.
Daqiiqada ugu horeysa, rinjiyeeyay jaranjarooyinka midabada koowaad (buluug, casaan iyo jaalle) xagga sare. Saddexdaas midab waxay ku midoobeen isgoys halkaasoo midabkoodu markaa la isku daray wax walbana lagu fidayo dhanka laga soo galo albaabka weyn, iyadoo lagu xardhay taallo gladiator ah oo taagan lama taabtaan iyo daahirnimadiisa oo dhan.
Markii dhammaan muuqaalka midabkan laga fiiriyo xagga hoose, qaanso roobaadka midabada ayaa ka soo horjeedda farshaxankaas kor ku yaal oo awood u leh abuur wada noolaansho qurux badan inta udhaxeysa tii hore iyo tan cusub mid ka mid ah matxafyada ugu faca weyn Warsav si loo muujiyo waxa farshaxanka casriga ahi yahay maanta.
Waxaa jiri doona kuwa aan jeclaan doonin oo raba, laakiin waa, wax walba, asal wanaagsan waana wax lala yaabo soo jeedinta farshaxankan reer Poland. Waxaad haysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isaga laga soo xigtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Farshaxanistaha reer Polish wuxuu ku buufiyaa jaranjarooyinka National Gallery rinji wuxuuna ku kasbaday saameyn xiiso leh
Michiyo Yasuda, Studio Ghibli colorist, ayaa naga tagaya